Nin dhintay isagoo gacalisadiisa si cajiib ah guur uga dalbanaya biyaha hoostooda |
Nin u dhashay dalka Mareykanka ayaa biyo ku geeriyooday xilli uu gacalisadiisa guur ka dalbanayay isagoo biyaha hoostooda ku jira, waxaana markaas ay lamaanahan damaashaadka fasaxa u joogeen dalka Tanzania.
Steven Weber iyo saaxiibaddiis Kenesha Antoine ayaa marka ay musiibadan dhaceysay waxay ku sugnaayeen dhisme biyaha dhexdeedo laga sameeyay oo ku yaalla xarunta dalxiiska ee Manta Resort, ee duleedka Jasiiradda Pembe.
Muuqaal lasoo galiyay baraha bulshada ayaa laga arkayaa Mr Weber oo biyaha hoostooda ku mukhuurtay si uu guur uga dalbado Ms Antoine.
Inta uu muuqaalka socdo ayaa sidoo kale la arkayaa Mr Weber oo gacalisadiisa tusaya qoraal uu ku amaanayo, kaasoo uu ka tusayay daaqad muraayad ah biyaha hoostooda ku jirta. Gabadha ayaa iyaduna ka duubeysay gudaha.
Ms Antoine, ayaa barteeda Facebook ku xaqiijisay geerida Mr Weber, waxayna sheegtay inay ahayd markii ugu horreysay ee uu aad ugu fogaatay biyaha hoostooda.
Mas’uuliyiinta xarunta loo dalxiiska tago ee Manta ayaa BBC-da u sheegay in Mr Weber uu si musiibo ah u geeriyooday isagoo mukhuurasho kaligiis ah ku sameynaya biyaha ka hooseeya qolka ay daganaayeen isaga iyo saaxiibaddiis.
“Waxaan annagoo aad uga xun idiin xaqiijineynaa shilka musiibada ah ee dhimashada sababay, kaasoo Manta Resort ka dhacay maalintii Khamiista ee ay taariikhdu ahayd 19-ka bisha Sitembar, 2019-ka”, sidaas waxaa lagu yiri bayaan ay soo saareen mas’uuliyiinta xarunta.
Matthew Saus, oo ah agaaimaha guud ee xaruntaas ayaa yiri: “Qof walba wuxuu la gariiray geerida Mr Weber”.
Mr Weber iyo Ms Antoine ayaa 4 habeen kireystay qolka biyaha ka hooseeya ee ku yaalla dhismaha badda ka dhex sameysan, kaasoo xeebta u dhulkeeda u jira qiyaastii 250m (820ft).
Halkii habeenba waxaa goobtaas dalxiisayaasha looga kireeyaa lacag dhan $1,700 (£1,300),
Maalintii saddexaad ee ay halkaas ku sugnaayeen, Mr Weber, oo kasoo jeeda magaalada Baton Rouge ee gobolka Louisiana, wuxuu go’aansaday inuu si lama filaan ah, oo waliba cajiib ah guurka ugu soo bandhigo gacalisadiisa.
Qoraalka uu ku ammaanayay oo uu gacanta kula qoray warqad uu bac sii dhex galiyay waxaa ku qornaa: “Neefteyda ma celin karo waqti dheer, si aan kuugu sheego waxyaabaha aan kugu jeclahay. laakiin… wax walba oo aan kugu jeclahay, maalin walba waan sii jeclaadaa!”
Qeybaha dambe ee muuqaalka Mr Weber ayaa soo bixiyay warqadda uu kusoo qoray qoraalka amaanta ah ee uu soo raaciyay dalabka guurka, ka hor inta uusan soo saarin faraantiga oo ku jiray sanduuq yar.
Mr Saus ayaa BBC-da u sheegay in shaqaalihiisu ay biyaha hoostooda u gurmadeen, laakiin markii ay u tageen inuusan jirin wax ay qaban kareen.
Ms Antoine ayaa qoraalka ay Facebook-geeda soo dhigtay ku tiri “Gacaliyaheyga nasiib uma uusan yeelanin inuu maqlo jawaabteyda ku aaddan codsigiisa guurka”, waxayna ahaan lahayd ‘haa’ oo hal malyan oo jeer ah”.
Waxay sidoo kale sheegtay in markaas ay isla qaadanayeen dalxiis wadajir ah oo nolosheeda u ahaa kii ugu macaanaa.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay ka warqabto dhacdadan ku saabsan dhimashada muwaadinkooda ku geeriyooday dalka Tanzania ee ku yaalla bariga Qaaradda Afrika.
“Waxaan tacsi tiiraanyo leh u direynaa qoyska uu ninkaas ka geeriyooday”, waxaa sidaas yiri afhayeen u hadlay Wasaaradda, wuxuuna intaas ku daray: “Waxaan diyaar u nahay caawinaad kasta oo looga baahan yahay qunsuliyadda”.